FAQs - JINDONGCHENG ELECTROMECHANICAL midziyo CO, LTD..
Magnetic bhokisi Pan akamedura 320E
Magnetic bhokisi Pan akamedura 420E
Magnetic bhokisi Pan akamedura 650E
Magnetic bhokisi Pan akamedura 1000E
Magnetic bhokisi Pan akamedura 1250E
Magnetic bhokisi Pan akamedura 2000E
Magnetic bhokisi Pan akamedura 2500E
Magnetic bhokisi Pan akamedura 3200E
PLASMA KUTEMA MACHINE
CHISANGANISO SHEAR BENDA ROLL
KUCHENGA BANDSAW MACHINE
CHIDZIDZO CHEMAOKO CHEMAOKO CHEMAOKO
Tubhu KUDzvanya TOOL
Q sei kushandisa muchina?
A You isai sheetmetal workpiece mu pasi clampbar, chinja pamusoro clamping, ipapo kudhonza huru pamupinyi (s) zvakabaya workpiece
Q sei clampbar zvakabatanidzwa?
A In kushandiswa, zvinonzi inoitwa pasi electromagnet simba chaizvo. Hazvina kurerekera kuvabereki zvechigarire, asi riri mu zvakarurama nzvimbo yacho pedyo netsime-vakaremerwa bhora pa mumwe mugumo.
Urongwa uhwu anokubvumira kuumba namahwindo sheetmetal zvitarisiko, uye kuti swap vamwe clampbars nokukurumidza.
Q chii kunonyanyisa ukobvu jira nayo achandipfugamira?
A It achandipfugamira 1,6 mm munyoro simbi papepa renguva kureba muchina. It anowembura mukobvu ari mapfupi yakareba.
Q Zvakadini aruminiyamu uye Stainless simbi?
A es, kuti JDC Bending muchina achandipfugamira pavo. The remagineti ichipfuura navo uye racho rose ringakweva pasi clampbar akatarira sheet.It achandipfugamira 1,6 mm aruminiyamu zvizere kureba, uye 1.0 mm Stainless simbi zvizere kureba.
Q sei kuti chinosimudzira?
Unopfuurira uye kwekanguva mutsigirire mutema "Start" bhatani. Izvi zvinokonzera chiedza rinobva clamping. Kana iwe kudhonza huru pamupinyi nayo rwoga Minamato haipindurwe kune zvizere simba clamping.
Q sei chaizvoizvo sei vanokunga?
A You Vanoumba vanobwembura manually kuburikidza kudhonza huru pamupinyi (s). Izvi anokotama kuti sheetmetal kunhivi pamberi pamucheto clampbar iro rakaitirwa panzvimbo magnetically. The yakakunakira angled pamwero pamusoro mubato anokuudza pakona rimwe vachikotama danda dzimwe nguva dzose.
Q sei kusunungura workpiece?
A Apo ukadzokera huru kubata magineti rwoga Minamato haipindurwe kure, uye clampbar zvabuda pamusoro wayo chitubu-akatakura kutsvaga balls, achisunungura workpiece.
Q Ko ikoko kuva residual remagineti yakasara workpiece?
A nguva wese muchina Minamato haipindurwe kure, pfupi neizvi kupomba pamusoro ano akatumwa kubudikidza electromagnet kuti de-magnetise zvose izvozvo uye workpiece.
Q sei kuchinja kuti simbi ukobvu?
A By vachichinja adjusters panguva nomumwe pamugumo huru clampbar. Izvi alters iri vachikotama Clearance pakati pamberi clampbar uye kushanda penyika vachikotama danda kana danda riri kumusoro 90 ° chinzvimbo.
Q sei iwe kuumba harikunguruswi ndokuhwadzira?
A Nokushandisa JDC Bending muchina kuti putira sheetmetal zvishoma dzakapoteredza kureba zvavo simbi nyere kana kumativi nomuzariro. Nekuti muchina inoshanda magnetically rinogona chinosimudzira zvinhu izvi.
Q Ine mugango-akamedura clamping minwe?
A It akaronga kuti pfupi clampbar zvikamu iyo inogona plugged pamwe nokuumba mabhokisi.
Q Chii locates pfupi zvikamu?
A The plugged pamwechete mapazi eumambo clampbar inofanira iri manually pamusoro workpiece. Asi kusafanana nedzimwe pani mabhureki, kumativi mabhokisi ako anogona kuva risina parinogumira yakakwirira.
Q Chii slotted clampbar nokuda?
A Zviri yokuva kudzika dzacho uye mabhokisi asingasviki 40 mm yakadzika. Inowanika sechinhu optioneel nemamwe uye anokurumidza kushandisa pane mutemo pfupi zvikamu.
Q Chii urefu tireyi vanogona slotted clampbar peta?
A It zvingaite chero urefu tireyi mukati Kureba clampbar. peya nomumwe cheap car insurance inopa kuti kusiyana hukuru pamusoro ane 10 mm siyana, uye nzvimbo yacho cheap car insurance yakanyatsodzidzwa aishanda kupa zvose zvinobvira hukuru.
simba Q sei magineti?
A The electromagnet anogona chinosimudzira ne 1 pub kwesimba zvose 200 mm urefu. Somuenzaniso, 1250E okusungisa kusvika 6 matani pamusoro uzere kureba.
Q Ko remagineti kusakara?
A No, kusiyana magnets a zvachose, kuti electromagnet havagoni Zera kana kunetesa yakafanira kushandisa. It chakagadzirwa pachena mukuru-kabhoni simbi kuti kunobva vachingoshandisa magetsi ari Coil nokuda kwayo magnetisation.
Q Chii mains zvitengeswa chinodiwa?
A 240 volts č. The mhando zvidiki (kusvika Model 1250E) kumhanyira kubva aingovawo 10 BSN nzira yokubudisa. Models 2000E uye vanoda 15 BSN nzira yokubudisa.
Q Chii zvishongedzo kuuya sezvo mureza pamwe JDC Bending muchina?
A The chemwenje, backstops, venguva yakareba clampbar uye kuva pfupi clampbars, uye bhuku vose yawapihwa.
Q What Zvingakudetsera nenhumbi?
iripo zvinosanganisira rakamanikana clampbar, munhu slotted clampbar yokuva mabhokisi kudzika zvikuru yakafanira uye simba fura pamwechete kutungamirira yakarurama kusarurama isina nokuveza sheetmetal.
modle ose kunge aripo, Tinogona kuronga kutumira kwamuri ASAP
Q Shipping encombrements?
makirogiramu 0.5mx 0.31mx 0.28m = 0.053m³ @ 30: 320E
makirogiramu 0.68mx 0.31mx 0.28m = 0.06m³ @ 40: 420E
650E: 0.88mx 0.31mx 0.28m = 0.08m³ @ 72 makirogiramu
1000E: 1.17mx 0.34mx 0.28m = 0.11m³ @ 110 makirogiramu
makirogiramu 1.41mx 0.38mx 0.33m = 0.17m³ @ 150: 1250E
2000E: 2.2mx 0.33mx 0.33m = 0.24m³ @ 270 makirogiramu
2500E: 2.7mx 0.33mx 0.33m = 0.29m³ @ 315 makirogiramu
3200E: 3.4mx 0.33mx 0.33m = 0.37m³ @ 380 makirogiramu
Q Example zvitarisiko
Mipendero, Chero-angled Bends, akakungurutsa micheto, achiomesa mbabvu, Closed migero, Mabhokisi, hwakakanganiswa pazvirugu, Deep migero, Dzokera Bends, Deep zvimbi
1. pakawanda Zvizhinji kupfuura kwakajairika sheetmetal benders.
2. No kukamurwa kuti kudzika mabhokisi.
3. Ko kuumba hova yakadzika, uye Akanyatsovharwa zvikamu.
4. Automatic clamping uye unclamping zvinoreva dzichimhanya oparesheni, zvishoma kuneta.
5. Rakarurama uye kuramba chinoratidza danda angled.
6. Quick uye yakarurama yokuvira angled chemabhazi.
7. Unlimited huro udzamu.
8. magumo kureba vachikotama mumatanho zvinobvira.
9. Open yakapera kugadzirwa anobvumira kumbopeta zvitarisiko dzakaoma.
10. Machines zvinogona ganged magumo-to-magumo kwenguva refu vachikotama.
11. zvinoenderana nyore kuti customized tooling (kiramba mbariro chaiwo muchinjikwa Zvikamu).
12. Self-kudzivirira - muchina haagoni migweje.
13. Utsanana, chiine ano nepurani.
School mabasa : mabhokisi mudziyo, letterboxes, cookware.
Electronics : chassis, mabhokisi, Racks.
Office midziyo : echiShinto, makabhati, kombiyuta-dzekuturika mikoko.
Food kugadzira : Stainless rinosakara & bhenji misoro, pedza Hoods, zvisviniro zvinopafuma.
Zvakavhenekerwa zviratidzo & simbi lettering.
Heaters & mhangura Canopies.
Manufacturing : Prototypes, kugadzira zvinhu, michina cover.
Electrical : switchboards, zviruva, chiedza Fittings.
Automotive : kugadziridza, mapoka, motokari miviri, Mujaho mota.
Agriculture : michini, bins, vanongodya, Stainless romukaka zvokushandisa, rinoteura.
Building : flashings, facias, garaji madhoo, shopfronts.
Garden anoteura, magirazi-dzimba, fenzi mbiru.
Air kutonhodza : ducts, achichinja zvidimbu, inotonhorera makamuri.
Q The yakasiyana nedzimwe centerless remubatanidzwa zvamagonhi
zvange yakatanga kunyanya nokuda JDC Bend ™, anoparadzirwa pamwe nokureba vachikotama danda uye nokudaro, kufanana clampbar, tora vachikotama mitoro pedyo apo vari generated.The kubatanidzwa zvinokonzerwa rinobva clamping pamwe inokosha centerless ndedzechokwadi nzira kuti JDCBEND ™ ane zviduku, nzvimbo okuponesa, muchina rurefu chaizvo simba-kuti-uremu reshiyo.
nokuti Kuwana workpiece
yokuva mabhokisi kudzika nekukurumidza
anogona kukurumidza kugadzirwa kubva zvidimbu simbi kubatsira peta-up zvitarisiko zvakaoma, uye nokuda kugadzirwa basa mureza clampbars inogona kutsiviwa unyanzvi tooling.
Q Operating Chinyorwa
Michina aripowo hwakadzama Chinyorwa inotaura mashandisirwo michina uyewo sei kuti siyana zvakafanana zvinhu.
dzinowedzerwa mbiri chinhu zvemagetsi akanamatirana kuti kunovimbisa yakachengeteka pre-clamping simba rinoshandisirwa clamping zvizere pamberi kunoitika.
mwedzi 12-garandi rinofukidza vainyeperwa zvinhu uye magadzirirwo pamusoro michina uye nenhumbi.
Q OEM uye ODM
Tiri fekitari, tinobvuma OEM uye ODM, uye vane kuvaka yakareba pamwe nemakambani mazhinji kudaro zvedu zvine mutengo, basa rakaisvonaka.
Q Une CE chitupa
hongu, tine chitupa, ndizivisei kana uchida izvozvo, ndichauchengeta kutuma kwamuri.
Q Une mumiririri muna USA.
HONGU, Tine, ndizivisei kana uchida chero rubatsiro, ndichakutumirai nokudyidzana Tel NO.
Q Ndiye gwaro mavambo iripo?
hongu, kuti rugwaro mavambo iripo